gvSIG Batoví wuxuu soo bandhigaa qaybinta gvSIG ugu horeysa ee Waxbarashada - Geofumadas
gvSIG Batoví, qaybinta koowaad ee gvSIG la soo bandhigay for Education
Sebtember, 2012 Baridda CAD / GIS, GvSIG
Dhaqdhaqaaqa caalamiga ah iyo xoojinta awoodda ay ku leedahay GvSIG Foundation waa mid xiiso leh. Ma jiraan khibrado badan oo la mid ah, barnaamij bilaash ah oo aan waligiis horey u lahayn bisaylkii hadda, iyo dhacdada guud ee qaarada oo wadaagay luqad rasmi ah. Booqashada heerka ganacsiga ayaa bilowday, bilowgii heerka tacliinta wuxuu noqon doonaa dammaanad qaadasho joogta ah haddii uu u doodayo siyaasadaha taageeraya.
Wasiirka Gaadiidka iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Uruguay, ayaa soo bandhigay Khamiistii la soo dhaafay GvSIG Batoví, oo ah Uruguay ugu horeysay oo ka soo jeeda GvSIG Educa.
gvSIG OW waa ahaanayta ah Geographic Information System Free gvSIG Desktop loo habeeyey sida qalab loogu talagalay qalab waxbarasho oo leh qayb juqraafi. gvSIG OW ay higsaneysaa in ay noqon aalad loogu talagalay barayaasha si ay u siiyaan ardayda falanqaynta iyo fahamka dhulka, isagoo awood u leh inay la qabsadaan si heerar kala duwan ama nidaamka waxbarashada. gvSIG OW fududaysa waxbarashada ardayda interactivity macluumaad, isagoo intaa ku daray qayb ka da'ayeen baadhitaan qalabkan, iyo fududeynta milmaan ee fikradaha dhex qalabka muuqaalka sida maps mowduuc ka caawiya inay fahmaan cilaaqaadka da'ayeen.
gvSIG Batoví waa, sidaas, hirgelinta software ah oo lacag la'aan ah in ay u badan tahay doonaa in lagu dabaqaa iyo isticmaalaa dalal badan. gvSIG Batoví waa software kexeeyey by Bureau Qaranka ee sahan Qorshaha Ceibal ah, kaas oo ardayda dugsiyada hoose iyo sare waxay yeelan doonaan in ay helaan macluumaad ku quudiyey didactic oo wakiil ka maps.
"Tan iyo hirgelinta Qorshaha Ceibal ah, dowladda doonayaa inuu horumariyo siyaasado naxa horumarka iyo lacagta ee waxbarashada caruurta, mustaqbalka iyo hadiyad ka mid ah dalka," ayuu yiri Pintado, isagoo intaa ku daray in ay sabab u tahay sifooyinka ay juquraafi ahaan dalka ma soo saari karaan alaabta ballaaran, "laakiin haa waxaan abuuri karaan iyagoo aan aqoon lahayn xad nooc kasta".
Inta lagu guda jiro soo bandhigidda xaflad qalab cusub soo qayb galay Hadalkan faylalka tacliimeed, ing. Pablo Genta, Agaasimaha Qaranka ee muuqaalka guud ee dhulka, ing. Jorge Franco iyo Dean of the Kulliyadda Engineering, ing. Héctor Cancela, Wasiirka waxa uu sheegay in wixii ka dambeeya caqabadaha soo-saarka, kuwaas oo, "Uruguay kala saari karaa nafteena by sirdoonka, awood u leh inay innovate iyo baaraan, iyo link aqoonta ay u horumarinta". "Taasna, barnaamijkan cusub ee loo yaqaan" gvSIG Batoví "wuxuu noqon doonaa asaas aasaasi ah maxaa yeelay wuxuu u oggolaanayaa helitaanka aqoonta weyn ee aqoonta," ayuu yiri.
The "gvSIG Batoví" wax soo saarka barnaamijka Bureau Qaranka oo dhan shaqo sahan, Kulliyadda Engineering iyo Association gvSIG ah, awood u siin doona ardayda in ay helaan aqoonta juqraafiga isticmaalka laptop-sharraxaad XO ku -computer , sidoo kale waa la kordhin karaa meelaha kale ee aqoonta, sida Taariikhda, Biyoloji, iyo kuwo kale.
Waxa ugu xiisaha badan waa suurtagalnimada in macallinka iyo / ama ardaygu siiyo macalimiin khaas ah oo ka soo jeeda qaybaha kala duwan ee macluumaadka laga heli karo dhulka. Hadafku waa in lagu dhiirrigeliyo barashada cilmi-raadinta, u-beddelidda shaqada sawir-qaadashada aqoonta qaab-dhismeedka.
Iyadoo "gvSIG Batoví" waxaan soo bandhigi karnaa khariidadihii ugu horeeyay ee khariidado mug leh oo ka socda dhulka Uruguay, sida khariidado siyaasadeed iyo kuwo jireed, qaybinta dadweynaha, kaabayaasha gaadiidka iyo isgaarsiinta iyo daboolka dhulka. Fududeynta helitaanka khariidadahan mawduuca ah - waxay ku xiran tahay fiilooyinka laga soo qaato codsiyada lafteeda - waxay u oggolaanaysaa wadaagista fududeynta kartoonada u dhexeeya macalimiinta iyo ardayda bulshada oo dhan ee software-ka.
Marka laga tago goobta waxbarashada, isticmaalayaasha xirfadlayaasha ah ee tiknoolajiyadda gvSIG waxay awoodi doonaan inay galaan shaqooyinkan cusub ee abuurista iyo wadaagista khariidadaha qaabka wax lagu soo dhejiyo, sidaas darteed noqdaan hab cusub oo aad u fudud oo la wadaagaya macluumaadka dhuleed.
URLka mashruuca: http://www.gvsig.org/web/home/projects/gvsig-educa
Waxay u muuqataa tallaabo muhiim ah, inkasta oo aanu ka faa'iideysano warka si aan u dhigno qaar ka mid ah riyooyinkeena.
Caqabada gvSIG Foundation waa iibinta nooc cusub, ma aha software. Shakhsi ahaan, waa arrin aad iigu riyaaqay aniguna waan ku faraxsanahay. Farsamada waxaa si fudud loo iibin karaa gvSIG taas oo macnaheedu yahay wax badan oo ay gaareen inkastoo ay sidoo kale ku kacday lacag badan, mawduuc oo su'aal badan laakin taasi waa xaqiiqo ah inaysan jirin waxyaabo lacag la'aan ah noloshaan. In la iibiyo nooc cusub waxay u baahan tahay istiraatiijiyad bulshadeed, siyaasadeed iyo dhaqaale heerar kala duwan. Tani waxay sidoo kale u baahan tahay lacag badan iyo natiijooyinka ma aha mid deg deg ah sida caddaynta shaqada farsamada. Waxaa jira digniin aan ugu horeeyay, sababtoo ah haddii caddaynta farsamada la is waydiiyo, yaynaan dhihin caddaynta qaabka la socon doono farqiga udhaxaadka badan iyo dhibaatadan marka laga reebo wixii cudurdaar ah waa mid sax ah si loo yareeyo lacagta kabidda.
Latin America waa qaarad heerarka kala duwan ee qaan-gaadhka ah ee xasiloonida siyaasadeed, maareynta maamulka, qorshaynta iyo isku xirnaanta tacliinta ee siyaasadda iyo dhaqaalaha. Sidaa daraadeed, heerka jiritaanka waa in laga shaqeeyaa si dadaal farsamo uu ku xiran yahay siyaasadaha guud ee damaanad qaadaya mudnaanta muddada dhexe. Hawlaha ma fududa haddii aan isku barbardhigo kala duwanaanshada kala-duwanaanshaha ee Mexico ka dhacay Patagonia. Nidaamaynta waxay noqon doontaa tan ugu fiican ee la samayn karo.
Marka, si loogu daro joqraafida qalabka kombiyuutarada ee waxbarashada, waxaynu ku aragnaa wax xiiso leh heerka heerka dhexdhexaadinta, taas oo ku dhowaad ka hortag ah. Qorshaha Ceibal waa mashruuc aad u fiican, laakiin waa inay hubisaa in ay taageerto hay'adeeda ama in loo arko in ay tahay mashruuc "qaar ka mid ah kuwa soo maray". Noqo tartan wanaagsan heerka waxqabadka sare, halkaas oo aad leedahay inay wax ka bedesho arinkii ee go'aaminta, iyo ka badan heer jaamacadeed halkaas oo wixii ka hadhana waa dadaal u xune palliatives karin ku dhaqanka.
Soo jeedintaydu waa isku mid. Iska ilaali inaad noqoto "Taliban". Dunidan, layliyo badan ayaa adagtahay in ay sii joogaan inkastoo ay waxtar leeyihiin. Nidaamka deegaanka ee tiknoolajiyada hadda waa in lagu taageeraa wadashaqeynta labada mashruuc ee khaas ah iyo furanaanta furan. Marka ugu horreysa ee dhinacyada dhaqaalaha ee hayaamaya dalal badan oo Latin America ah waxay dareemayaan weerar ay soo qaadeen, waxay xidhaan albaabada, xitaa haddii ay tahay in ay qaadaan afduub ama ay iska kaashadaan iskaashiga caalamiga ah. Ka dibna, waxa la nidaamiyay, waxa lala xiriirinayo siyaasadaha dadwaynaha ayaa noqon doona kuwa isticmaala kuwaas oo difaacaya waxa ay ka fahamsan yihiin qaabka.
Waqtiga wanaagsan leh gvSIG Batoví
Post Previous«Previous Waa maxay New in AutoCAD, ArcGIS iyo Global Mapper
Post Next 10 + 5 maqaaladaa xasuusiya + majaladda 1Next »
Mid ka mid ah Reply in "gvSIG Batoví, qaybinta koowaad ee gvSIG for hadiyado Education"
Camila isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay maqaal wanaagsan, fikradahaaga ayaa na dhiirrigeliyay oo hadda waxaan ku sugan nahay Xarunta Jaamacadda Francisco José de Caldas ee Kolombiya waxaan u furaynaa koox barnaamijyo bilaash ah iyo Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga ee loo yaqaan SIGLA (Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga oo leh Software Bilaash ah iyo Furan) iyo hadda waxaan bilaabeynaa inaan daabacno waxyaabaha kujira gudaha http://geo.glud.org, na soo booqo !!!